မိမိ၏နှလုံးသားအလိုကို ဦးနှောက်လေးနဲ့ ချင့်ချိန်လိုက်ပါ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ – Hlataw.com
မိမိ၏နှလုံးသားအလိုကို ဦးနှောက်လေးနဲ့ ချင့်ချိန်လိုက်ပါ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
စုယမင်းသည်ပက်လက်လှန်ထားသောရဲနောင်အပေါ်သို့တက်ခွ ၍ ရဲနောင်၏ရင်ဘတ်ကိုလက်ထောက်လျက်ကုန်း၍သူမဖင် ကြီးကိုပင့်ပင့်၍ဆောင့်ချကာတက်လိုးနေခြင်းဖြစ်လေသည်။စုယမင်းက အပေါ်ကတက်ခွလျက်စိတ်ကြိုက်လိုးပေးနေသော်လည်း ညီးတွား ရေရွတ်နေရသူမှာလည်းစုယမင်းဖြစ်နေလေသည်။စုယမင်းသည်တင်ပါး အစုံကိုမြှောက်ကာကြွကာဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေရင်း စောက်ပတ်အတွင်းလီးကချက်ကောင်းထိမိသောအခါ အားရကျေနပ်စွာခေါင်းကို မော့လျက်ပါးစပ်လေးဟကာညီးတွားမိခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။အရည် ရွှမ်းသောစောက်ပတ်ဖြစ်သည့်အတိုင်းစုယမင့်းစောက်ပတ်မှယိုစီး ကျလာသောစောက်ရည်များသည်ရဲနောင်၏ဆီးခုံပေါ်ဝယ်အိုင် ထွန်းနေလေပြီ။ ” အား…. အင့်….အား ကောင်းလိုက်တာမောင်လေး ရယ် ” အခုတော့စုယမင်းသည်ဖင်ကိုမြှောက်၍မ၍မလိုးတော့ဘဲ ရဲနောင်၏ လီးတဆုံးဝင်အောင်ထိုင်ချလျက်။
အပြင်သို့နိမ့်ဆင်းလာသောသူမသား အိမ်ခေါင်းနှင့်ရဲနောင်၏လီးထ်ိပ်ကပ်ပွတ်ခါအလွန်တရာကောင်းမွန်လှသောလောကအရသာကိုအပြည့်အဝခံစားနေလေသည်။ ထို့ကြောင့် စောက်ပတ်ဖြင့်လိုးဆောင့်ခြင်းမပြုတော့ဘဲလုံးဝန်းတင်းကား နေသောသူမ၏တင်ပါးကြီးကိုလှုပ်၍အတင်းကပ်ပွတ်ပေးနေလေသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကိုလီးထိပ်ဖြင့်ထောက်မိထားချိန်တွင်တင်ပါးကိုလှုပ်၍ ကပ်ပွတ်နေသောကြောင့် အောင့်လည်းအောင့် ကောင်းလည်းကောင်း ပြီးအီစိမ့်သောကာမစည်းစိမ်ကိုအပြည့်အဝရရှိနေသောကြောင့်စုယမင်း ခမျာပါးစပ်ကလေးဟလျက်အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှုရင်းညီးတွားနေမိလေသည်။ ပြင်းထန်သောကာမအရှိန်ကြောင့်သွေးသားများထကြွလှုပ်ရှားနေရချိန် တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအပြင်းအထန်ဖိကြိတ်လိုးနေသောကြောင့်စုယမင်းနဖူးစပ်တွင်ချွေးသီးကလေးများစို့ကာ ကျောပြင်တလျှောက်မှလည်း ချွေးစက်များစီးကျနေချိန်ပြီ။
သူမနည်းတူ အောက်မှခါးကော့၍ပင့်မြှောက် နေရသောရဲနောင်ခများလည်းချွေးပြန်နေချေပြီ။ စုယမင်းတို့လင်မယားအိပ်ခန်းတွင်အဲယားကွန်းတပ်ထားသဖြင့်သာတော် သေးသည်ဟုဆိုရပေမည်။ တကယ်တော့စုယမင်းသည် လင်ယောက်ကျားမလေးရှားတွင်အလုပ် သွားလုပ်သည်မှ ၂ နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ထကြွလာသော ကာမဆန္ဒကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့သဖြင့်အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည့် သူမထက်အသက်ရှစ်နှစ်ကျော်ငယ်သောရဲနောင်ကိုအရောဝင်အထားပေးကာ လင်ငယ်ထားအလိုးခံနေသည်မှာယခုဆိုလျင် နှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်လေသည်။ အမှန်က စုယမင်းသည်အသက်၃၅ နှစ်ကျော် အိမ်ထောင်သက်၁၂ ခန့် ရှိပြီဖြစ်သောအိမ်ထောင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်လေသည်။စုယမင်းအနေဖြင့် အသက် ၂၂ ၂၃ နှစ်ခန့်ကအိမ်ထောင်ကျကာ ၂ နှစ်အတွင်းသမီးကလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့လေသည်။စုယမင်း၏ခင်ပွန်းမောင်မောင်မှာလည်းစုယမင်းနှင့်ရွယ်တူဖြစ်ခါ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော်ခန့်ကမှ။
သူ၏ ကုမ္ပဏီ၏အဆက်အသွယ်ဖြင့်မလေးရှားတွင်တရားဝင်အလုပ်ရရှိကာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်လေသည်။ သူမယောက်ကျားပြည်ပသို့ထွက်ခွါသွားပြီး ၆ လကျော်ကျော်ခန့်အထိ အိနြေ္ဒရရ ဗိုက်ကောင်းကျောက်ဖိနေထိုင်ခဲ့သော်လည်း ၆ လကျော် ပြီးနောက် ထကြွလာသောသွေးသားဆန္ဒအရ ယောက်ကျားလေး ကြီးကြီးငယ်ငယ်များနှင့်လက်ပွန်းတတီးရောရောနှောနှောနေထိုင်ကာ စိတ်ဖြေရာရှာခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်း ၂ နှစ်ပြည့်သည်အထိယောက် ကျားဖြစ်သူကပြန်မလာနိုင်သောအခါစုယမင်းသည် ကုမ္ပဏီတွင်သက်တူ ရွယ်တူဖြစ်သူ ကိုထင်မြင့်နှင့်လွန်ကျူးမိကြလေသည်။ကိုတင်မြင့် မှာလည်းအိမ်ထောင်သည်တယောက်ဖြစ်သဖြင့်နှစ်ယောက်သားတိုးတိုး တိတ်တိတ်တည်းခိုခန်းများ ဟော်တယ်များသို့ရုံးပိတ်ရက်များတွင် စိတ်တူကိုယ်တူလိုးပွဲများဆင်နွှဲခဲ့ကြလေသည်။နှစ်ယောက်လုံးမှာအိမ် ထောင်သည်များဖြစ်ကြသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်။
လိုးနည်းပေါင်းစုံလိုးခါ ပြင်းထန်သောစုယမင်း၏ကာမအလိုရမ္မက်ကိုဖြေဖျောက်လေသည်။ထို့ အပြင်ခင်ပွန်းလင်ရှိစဉ်ကတည်းက ကာမဆက်ဆံချိန်တွင် စိတ်ပိုမိုထကြွစေသောခပ်ကြမ်းကြမ်းစကားလုံးများသုံးခဲ့ဘူးသည့်အလျောက် ယခုကိုတင်မြင့်ကအားရပါးရလိုးပေးသောအခါ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်အပြန်အလှန်ပြောဆိုရင်းလိုးကြသည်က။ ကမစည်းစိမ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံစား ရသည်ဟုစုယမင်းထင်လေသည်။ သို့သော် ကိုတင်မြင့်နှင့်တိတ်တ်ိတ်ပုန်းနောက်မီးလင်း၍မှတနှစ်မပြည့် ခင်တွင် ကုမ္ပဏီရုံးမှလူများနှင့်ကိုတင်မြင့်မိန်မကရိပ်မိလာသလိုလိုရှိ လာသဖြင့် စုယမင်းမှာအရှိန်သတ်ကာ ခပ်ခွါခွါနေ၍ကိုတင်မြင့်နှင့်အဆက်ဖြတ်လိုက်လေသည်။ကိုတင်မြင့်နှင့်စုယမင်း၏ဆက်ဆံမှုကိုရိုးတိုး ရိတိတ်သိရှိသောကုမ္ပဏီမှယောက်ကျားကြီးငယ် လူပျိုလူအိုများမှ စုယမင့်းအနီးချဉ်းကပ်၍ရိသဲ့သဲ့လုပ်ချင်သော်လည်း စုယမင်းကမျက်နှာ ထားတင်းတင်းထား၍ခပ်တည်တည်ဆက်ဆံသောကြောင့်ဖယ်ကြဉ် သွားကြလေသည်။
အမှန်မှာစုယမင်းအနေဖြင့် လင်ဖြစ်သူအပါအဝင်ယောက်ကျားနှစ်ယောက်နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအရှက်ကုန်အောင်ကာမဆက်ဆံဘူးပြီ ဖြစ်သည့်အပြင်အသက် ၃၀ ကျော်သွေးသားကောင်းမွန်သောအရွယ်ဖြစ် သဖြင့်။ ယောက်ကျားများနှင့်ကာမဆက်ဆံလိုသောစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြဆဲပင် ဖြစ်လေသည်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အလိုးခံချင်စိတ်များထက်သန်ပြင်း ပြဆဲပင်ဖြစ်လေသည်။သို့သော်စုယမင်းအနေဖြင့်ဤကိစ္စကိုမည်သူမျှမရိပ်မိမသိရှိဘဲ ပိပိရိရိဖြင့်သာဆက်ဆံလိုသဖြင့် မည်သူမျှမရိပ်မိမသိရှိနိုင် သောကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်သူမလိုအင်ဖြည့်ပေးနိုင်မည့်ယောက်ကျား သားများကိုကြိတ်၍ရှာဖွေခဲ့လေသည်။ ဤတွင်အိမ်ချင်းကပ်လျက် သူမထက်ရှစ်နှစ်ငယ်ကာ ငယ်စဉ်က မောင်နှမလိုနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည့်အသက်၁၇ နှစ်သာရှိသေးသော ရဲနောင်ကိုတွေ့လာခြင်းဖြစ်လေသည်။ရဲနောင်မှာသူမ အပျို အရွယ်အသက် ၁၇ နှစ်ခန့်လောက်ကအသက်ရှစ်နှစ်သာရှိသေးလေ သည်။
နောက်ပိုင်းသူမအိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ရဲနောင်မှာလည်းမေမြို့ ဘော်ဒါဆောင်တွင်ကျောင်းသွားတက်နေရာမှ။ ယခုဆယ်တန်းဖြေပြီး နောက်အိမ်သို့ပြန်လာချိန်တွင်ပြန်တွေ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ယခင်က ပင်သူမတို့မိသားစုမှာနှစ်အိမ့်တအိမ်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်လေရကား ယခုလည်းသူမအိမ်သို့ဝင်ထွက်သွားလာနေသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ချေ။ သူမအိမ်တွင်သူမဖခင် မိခင်နှင့်သူမသာရှိပြီးစုယမင်း၏သမီးငယ်မှာလည်း ယောက်ခမများကခေါ်ယူကျောင်းထားပေးသဖြင့်အိမ်တွင်ရှိ မနေသည်မှာလည်းစုယမင့်းအဖို့သူမတန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော် နိုင်ဘို့တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေလေသည်။ထို့အပြင် စုယမင်းတို့အိမ်မှာ နှစ်ထပ်တိုက်ခံအိမ်ဖြစ်သဖြင့်စုယမင်း၏မိဘများမှာအိမ်အောက်ထပ်တွင် သာအနေများပြီး အိမ်အပေါ်သို့ မနက်နှင့်ညဦးပိုင်း ဘုရားတက်ရှိခိုး သည်မှလွဲ၍အိမ်ပေါ်သို့တက်လေ့မရှိသဖြင့်စုယမင်းမှာပိုမို၍လွတ်လပ်ခွင့် ရနေလေသည်။
ထို့အပြင်အိမ်အပေါ်ထပ်တွင် အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်း တွဲရက်ပါသဖြင့်ပိုအဆင်ပြေနေလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့်စုယမင်းမှာငယ်စဉ်ကမောင်အရင်းသဖွယ်ဖြစ်သောလူပျိုရိုင်း ကလေး ရဲနောင် ကိုမြူဆွယ်သိမ်းသွင်းပြီးအားရပါးရအလိုးခံနေ သည်မှာယခုအကြိမ်နှင့်ဆိုလျင်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်လေသည်။ စုယမင်းသည်ရဲနောင်၏လီးကိုသူမစောက်ခေါင်းအတွင်းအဆုံးထိဝင်အောင်အပေါ်မှထိုင်ချလျက် လီးထိပ်ဖြင့်သူမသားအိမ်ခေါင်းထောက်မိသွားသောအခါမှအရသာခံယူလျက် အတင်းဖိကြိတ်ပြီးပြည့်ဖြိုးတောင့် တင်းသောသူမဖင်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းကာကပ်ညှောင့်ပေးနေလေသည်။ ထိုသို့အပေါ်မှကုန်း၍တက်ညှောင့်နေသောအခါတောင်ထနေသောသူမ စောက်စိကလေးကလည်းရဲနောင်၏လီးအရင်းဖြင့်ပွတ်ကြိတ်မိကာ အလွန်ကောင်းမွန်သောလောကီစည်းစိမ်ကိုမျက်တောင်လေးများစင်း၍။ ရရှိခံစားနေပြီဖြစ်လေသည် “အောင်မယ်လေးမောင်လေးရယ် မင်းရဲ့လီးကြီးကလည်းမာလိုက်တာ ကွယ်။
အမရင်ခေါင်းထဲအထိရောက်အောင်ဝင်လာသလားမှတ်ရတယိ မင်းလီးထိပ်ကမမစောက်ခေါင်းထဲကသားအိမ်ခေါင်းကိုထောက်မိနေတာမောင်လေးသိတယ်မဟုတ်လား” စုယမင်းသည်အသက်၃၀ ကျော်အိမ်ထောင်သည်တဦးဖြစ်သည့်အပြင် တစိမ်းယောက်ကျားတဦးနှင့်လည်းခိုး၍လင်ငယ်နေနောက်မီးလင်းဘူး သည့်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည့်အတိုင်း ကာမဆက်ဆံသည့်အခါအခုလို ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြောဆိုရင်းလိုးရသည်ကိုအထူးနှစ်ခြိုက်သဘောကျနေ လေသည်။ “အား…အင့်… အ…. ရှီး …. မောင်လေးရယ်မင်းရဲ့လီးကြီး နဲ့လိုးနေရတာ မမစောက်ဖုတ်ကြီးထဲကအရမ်းကောင်းနေတာသိရဲ့လား” “သိပါတယ်မမရယ်။ မမစောက်ခေါင်းအဆုံးသားအိမ်ခေါင်းကိုကျတော့် လီးထိပ်နဲ့ထောက်မိပြီးကပ်ပွတ်နေတော့လီးထျပ်တခုလုံးကျင်တက် လာပြီးအီစိမ့်နေအောင်အရသာရှိနေတာပါဘဲ မမရယ်” အောက်မှ ရဲနောင်ကလည်းခါးကြီးကိုပင့်မလျက်။
သူ၏လီးကိုအတင်းဖိကပ်ပွတ်ကြိတ်နေသောစုယမင်း၏စောက်ခေါင်းအတွင်းပြန်လည် လိုးညှောင့်ပေးနေသဖြင့် နှစ်ဦးသားမပေးအယူမျှကာလီးနှင့်စောက်ပတ် တို့ထိတွေ့မှုကာမအရသာကိုအပြည့်အဝခံစားလျက်ရှိကြလေသည်။ စုယမင်းမှာအသက် ၃၅ နှစ်ကလေးတယောက်အမေအိမ်ထောင်သည်တဦးဖြစ်သော်လည်း လုံးဝန်းဖွံ့ထွားသောတင်ပါးများနှင့်ပြည့်မောက်ဆဲ ရင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးချိုမြသောမျက်နှာပေးဖြင့် ဆွဲဆောင်မှု ပြည့်ဝသောမိန်းမလှတဦးဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ်လေသည်။ ခါးကလေးမဆို စလောက်တုတ်လာပြီးဆီးခုံလေးအနည်းငယ်ပြည့်မောက်လာသော လည်းကြီးမားဖွံ့ထွားသောရင်အစုံနှင့်လုံးဝန်းပြည့်ဖြိုးသောတင်ပါးတို့ ကြောင့်အချိုးအဆစ်ကျနဆဲပင်ဖြစ်လေသည်။သူမ၏ဖင်လုံးကြီးများမှာ အနည်းငယ်ပျော့အိသွားပြီးနို့ကလေးမသိမသာတွဲကျနေသည်မှလွဲ၍ အခြားအပြစ်ပြောစရာမရှိလှသောအလှပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်လေသည်။
ယခု လည်း အသက် ၁၇ နှစ်သာရှိသေးသောသူမထက်အသက်ရှစ်နှစ်ခန့် ငယ်သူရဲနောင်ကိုစိတ်တိုင်းကျတက်လိုးနေရသဖြင့် တဏှာများ ထကြွကာအပေါ်မှတက်ခွ၍အကြီးအကျယ်လိုးညှေင့်ပေးနေခြင်းဖြစ် လေသည်။ သူမ၏တရားဝင်ခင်ပွန်းလင်ဖြစ်သူ၏လီးမှာတော်တော်လေးတုတ်ခိုင် ကြီးမားထွားကြိုင်းသော်လည်း အိမ်ထောက်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်လာ ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မာကျောမှုလျော့ကျလာပြီးသူမကိုတက်လိုးပေး သောအခါ။ သိပ်မာတောင်မှုမရှိတော့ဟုထင်မိလေသည်။ထို့အတူသူမ နှင့်နောက်မီးလင်း ခဲ့ဘူးသူတင်မြင့်မှာလည်းလီးလုံးပတ်ကြီးမားထွား ကြိုင်းသော်လည်းမာတောင်မှုအားနည်းသည်ဟုထင်မိလေသည်။ ယခုစုယမင်းနှင့်လိုးပွဲကျင်းပနေသောရဲနောင်မှာမူ အရင်အလိုးခံ ဘူးသောလီးများလောက်မကြီးလှသော်လည်း လီး၏မာတင်းထောင်မတ်မှုမှာမူ လူပျိုပေါက်ကလေးတဦးပီပီ စိတ်တိုင်းကျလောက်အောင် မာကြောတောင်ထနိုင်လေသည်။
ရဲနောင်မှာလူပျိုပေါက်ကလေး တဦးဖြစ်သဖြင့်စတင်လိုးကြစဉ်က အချိန်တိုဖြင့်လရည်များပန်းထုတ် ပျော့ကျသွားသော်လည်း လူပျိုလေးတဦးဖြစ်သည့်အတိုင်းအချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်ထောင်မတ်လာခဲ့လေသည်။ထို့အပြင်ပြန်တောင်လာ သောလီးမှာလည်းစံချိန်မှီမာတောင်သည်ဖြစ်သဖြင့်စုယမင်းမှာသဘောကျ၍ကောင်လေးအပေါ်အချစ်ပိုမိလေသည်။ ထို့ကြောင့် လီးအတောင်မြန်သောကောင်လေးကိုရေရှည်ဆွဲလိုးပေးနိုင် အောင်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်လျင် စုယမင်းလိုလားပြင်းပြနေသောကာမ ဆန္ဒများကိုရေရှည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားမိလေသည် ထို့အပြင်ငယ်ရွယ်သေးသောရဲနောင်၏လီးမှာတဖြေးဖြေးအသက် အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကြီးမားရှည်လျားလာမည်ဟုယူဆမိလေ သည်။
တကယ်တော့မိန်းမတယောက်၏ကာမဆန္ဒကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆီးပေး နိုင်ရန်အတွက်ယောက်ကျား၏လီးမှာကြီးမားရှည်လျားမှုထက်အချိန် ကြာကြာမာတောင်နေမှုကအဓိကဖြစ်သည်ဟုသာစုယမင်းလက်ခံထား လေသည်။ အပေါ်မှတအိအိ တစိစိဖြင့်တက်ညှောင့်လိုးပေးနေသောစုယမင်းမှာ သူမ၏တလှုပ်လှုပ်တွဲကျနေသောနို့ကြီးနှစ်လုံးကိုဖြစ်ညှစ်ပွတ်သပ် ပေးလျက် လက်မလက်သည်းခွံအရွယ်နို့သီးခေါင်းနှစ်လုံးကို။ ကျော် အောင်ကဖိပွတ်ငုံစို့ပေးလိုက်သောအခါတကိုယ်လုံးတဖျင်းဖျင်းဖြစ် လျက်စောက်ရည်များတဖြန်းဖြန်းပန်းထုတ်ခါ ကာမစည်းစိမ်ကိုအပြည့် အဝခံစားရရှိလိုက်လေတော့သည်။စုယမင်း၏စောက်ပတ်ကြီးပြီးဆုံးခြင်း သို့ရောက်ရှိသွားလျင်သွားခြင်းစောက်ပတ်ကြီးမှာရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်လျက် စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများဖြင့်ရဲနောင်၏လီးကြီးကိုပွတ်သပ် ဖြစ်ညှစ်ပေးလိုက်သောအခါ။
ရဲနောင့်ခမျာလည်းတင်မထားနိုင် တော့ဘဲသူ၏လီးရည်များကိုစုယမင်းစောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ထောင် ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။ ရဲနောင်၏လီးရည်ပူပူနွေးနွေးများသူမ၏စောက်ခေါင်းအတွင်း တပြစ်ပြစ်ပန်းထုတ်ပေးလိုက်သည်နှင့်ကာမအထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောစုယမင့်းခမျာအချိုပေါ်သကာဆင့်ဆိုသလို မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင်ကာမအရသာကိုခံစားလျက်ရဲနောင့် အပေါ်သို့မှောက်ရက်ထပ်ကျသွားပြီးစောက်ခေါင်းအတွင်းလီးကြီးကို စိမ်ထားပြီးချိုမြိန်သောကာမအရသာကိုဆင့်၍ဆင့်၍ရရှိခံစားနေလေ သည်။ ထို့အပြင် လောကစည်းစိမ်အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိအောင်တက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းပို့ဆောင်ပေးသောရဲနောင်၏မျက်နှာကိုပီတိအပြည့်ဖြင့် တရှုတ်ရှုတ်နမ်းရှုံ့ပေးနေလေသည်တကား……ပြီးပါပြီ။
ခဏနဲ့ ထာဝရတွေက ပျောက်သွားတတ်တယ်